Soosaarayaasha PCB-ga badan Shiinaha Multilayer PCB Factory & Shirkado
4 guddiga wareegga lakabka adoo adeegsanaya maaskarada dhejiska
Kani waa guddiga wareega 4 ee wareegga alaabada baabuurta. UL shahaado Shengyi S1000H tg 150 FR4 wax, 1 OZ (35um) dhumucda naxaasta, ENIG Au dhumucdiisuna 0.05um; Ni dhumucdiisuna 3um. Ugu yar iyada oo loo marayo 0.203 mm oo lagu rakibay maaskarada dhejiska.
6 guddiga wareegga lakabka ee dareemayaasha warshadaha & xakamaynta
Kani waa guddiga wareega 6 lakab ee dareemayaasha warshadaha & wax soo saarka xakamaynta. UL shahaado Shengyi S1000-2 (TG≥170 ℃) maaddada FR-4, 1 OZ (35um) dhumucda naxaasta, ENIG Au Dhumucdiisuna tahay 0.05um; Ni dhumucdiisuna 3um. V-dhibcaha, Milling CNC (wadada). Dhammaan wax soo saarka waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
8 lakabka guddiga wareega OSP dhammaystir PC gundhig
Kani waa guddiga wareegga 8 lakab ee alaabada PC-ga ah. Dhamaadka OSP (Nooca Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah) waa deegaan ku habboon deegaanka, iyo mid aad u cagaaran xitaa marka la barbardhigo dhammaystirka PCB-yada kale ee Lead-Free, oo sida caadiga ah ku jira walxo badan oo sun ah, ama u baahan tamar aad u sarreeya. OSP waa dhameystir dusha sare ee bilaa hogaanka ah, oo leh dusha sare oo aad u siman oo loogu talagalay Golaha SMT, laakiin sidoo kale waxay leedahay nolol gaaban oo gaaban.
Kani waa guddi wareeg ah oo 10 wareeg ah oo loogu talagalay alaabta PDA ee Ultra-rugged. Waxaan ku taageernaa macaamilka qaabeynta PCB. Shengyi S1000-2 (TG≥170 ℃) maaddada FR-4. Ballaca khadka ugu hooseeya / kala dheereynta 4mil / 4mil. Via ku xirmay maaskaro Alxan.
12 lakab sare tg FR4 PCB sare loogu talagalay Nidaamka Dhexgalka
Tani waa guddiga wareegga lakabka 12 ee alaabta nidaamka gundhigga ah. Naqshadeynta oo leh xariiq aad u adag iyo kala dheereynta 0.1mm / 0.1mm (4mil / 4mil) iyo Multi BGA. UL shahaado sare tg 170 wax. Isbeddelka Hal-abuurka ah & Kala-baxa Kala-baxa.
14 lakabka wareega wareega maaskaro maaskarada cas
Kani waa guddiga wareegga 14 lakab ee alaabada qalabka korontada ku shaqeeya. PCB-ga oo leh dhammaystir dahabi ah oo adag (far dahab leh). Maaddaama ay tahay sheyga tiknoolajiyadda sare, maaddadu waxay isticmaashaa Shengyi S1000-2 FR-4 (TG≥170 ℃). Alxanku wuxuu u daboolaa casaan wuxuuna umuuqdaa mid dhalaalaya.
16 lakab PCB Multi BGA for telecom
Kani waa guddiga wareegga wareegga 16 ee warshadaha isgaarsiinta. Cabbirka guddiga 250 * 162mm iyo 2.0mm dhumucda PCB. Pandawill waxay bixisaa looxyo wareegsan oo daabacan oo bixiya qalab kala duwan, miisaanka naxaasta, heerarka Dk, iyo guryaha kuleylka ee suuqa isgaarsiinta weligiis isbedelaya.